Banyere Anyị - Shandong Gongxian Gmengyuan Co., Ltd
Black garlic usoro
Ose ngwaahịa usoro
Agwa ngwaahịa usoro
Shandong Gongxiang Mengyuan Trading Co., Ltd. bụ mbubata na mbupụ trading ụlọ ọrụ ọkachamara na miri nhazi nke ugbo ngwaahịa. Na narị afọ nke 21, ọ zara ndị Party Central Committee oku maka owuwu nke "Maritime Silk Road" na-ekwe ka Chinese ugbo ngwaahịa na-eje ozi Southeast Asia, Central Asia, West Asia, North Africa, na Central ha na Eastern Europe.
Shandong Gongxiang Mengyuan Trading Co., Ltd. dị na nchoputa nke okpukpe Kọnfushọs, obodo nke Confucius, Jinan, Shandong, China. The obodo nke Jinan nwere 72 aha nke isi iyi, ezinụlọ ọ bụla mmiri mmiri, ezinụlọ ákwá willow, na ebe ndị mara mma, na ụwa ma ama. The ụlọ ọrụ tumadi emekọ miri nhazi nke ọpụrụiche ugbo ngwaahịa, dị ka: ose, chili ihendori ngwaahịa, spiced sizinin na ngwaahịa, na friji na soy ngwaahịa, mkpọ mkpụrụ ngwaahịa, hawthorn ngwaahịa, garlic na ngwaahịa, jujube ngwaahịa, miri-usoro chicken miri nhazi ngwaahịa na ndị ọzọ na ngwaahịa.
Anyị ụlọ ọrụ mgbe niile-ekwu si na ụmụ mmadụ bụ mmụọ nke "na-arụkọ ọrụ na-aha, na-achọ mmepe na-edu, lee ahịa ina ka ndu, ma na-ibe uru ma merie-mmeri dị ka ntọala ya" na-achọ nkịtị development.
The enterprise omenala
Vision: Mee a efu-anya ikpo okwu maka ụwa ịghọta Chinese ugbo ngwaahịa Mission: Iji ghọọ ndị nduzi na Babilọn nke ugbo ngwaahịa mbupụ ụlọ ọrụ, na-akwalite ahụ dissemination nke Confucian omenala Ụkpụrụ: Site Lilliput ka Iwuli a Community of Human Health Fate
Adress: Room 1-101-1, Iwuli 11, Hailiangyuanli, Nke 717, Fengming Road, Baoshan Street, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, China